Puntland oo sheegtay in aysan aqbali doonin dib u dhaca doorashada in marmarsiiyo looga dhigto Coronavirus - Awdinle Online
Puntland oo sheegtay in aysan aqbali doonin dib u dhaca doorashada in marmarsiiyo looga dhigto Coronavirus
Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed C/raxmaan Dhabancad ayaa ka hadlay mowqifka Puntland ay ka taagan tahay dib u dhac ku yimaada qabsoomida doorashada guud ee dalka.
Wasiir Dhabancad ayaa sheegay in aysan aqbali doonin dib u dhac ku yimaada doorashada, iyadoo marmarsiiyo looga dhiganayo Coronavirus, waxaa uux usay in doorashada Soomaaliya ay tahay arrin dastuuri ah oo waajib ku ah inay qabtaan madaxda dowladda Federaalka.
“Haddii Madaxda dowladda isku daydo inay sameeyaan muddo kororsi ay sababi karto in dalka ka dhacdo xasillooni daro iyo si qabqabsi siyaasadeed, mana ogolaan doono marmarsiiyo looga dhigto Coronavirus.”ayuu yiri Wasiir Dhabancad.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in xaalada la xiriirta cudurka Coronavirus ee dalka ay tahay mid ka sii dartay, loona baahan yahay in wadatashi laga sameeyo, si looga hortago khatartiisa.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa isa soo tarayay hadal heyn ku aadan in dowladda Federaalka damacsan tahay inay dib u dhigto doorashada, sababo la xiriira Coronavirus, waxaana dhowaan hakad la geliyay shaqadii Guddiga dhameystirka sharciga doorashooyinka ee ka soo baaraan-dagaya goobaha loo asteyn doono inay ka dhacaan doorashada ee la geyn doono kuraasta Baarlamaanka labada Aqal.
Previous articleWHO oo ka digtay in la qafiifiyo xayiraadaha lagu soo rogay wadama Caalamka
Next articleGuddoomiye”Cismaan Barre”Shacabka Hir-Shabeelle badbaado ayay rabaan”